MEKTOUB OMAR EL CAMILLE : kilasiana ho mpivarotra sy mpamadika tanindrazana izay rehetra hiroso amin’ny fifidianana – MyDago.com aime Madagascar
MEKTOUB OMAR EL CAMILLE : kilasiana ho mpivarotra sy mpamadika tanindrazana izay rehetra hiroso amin’ny fifidianana
Ny nifanarahana nanomboka teny Ankorondrano hoy Andriamatoa Mektoub teny amin’ny Magro Behoririka omaly dia ny fampodiana ny filoha Ravalomanana, izay ihany no nifanarahana teto. Ny voalazan’ny tondrozotra hoy izy ao amin’ny andininy faha 2 dia milaza fa ny fanatanterahana ny fifidianana dia tokony ho tsy miandany, mangaraharaha, demokratika. Izahay hoy izy dia nametraka fitoriana ny CES, ny Ceni-T , governemanta. Tsy manaran-dalàna daholo ireo olona ireo , izay notsipihanay fa ny voalazan’ny lalàna dia tsy azo ivalozana ny didin’ny CES. Ny mahagaga dia nesorin’ny CES tsy ho kandidà i Neny. Aminay movansy Zafy hoy Mektoub dia tsy mety izany satria ny lalàna navoakan’ny CES dia antidemokrarika,mpanavakavaka. Nahoana hoy izy ny Malagasy ray sy reny tsy manana “double nationalité” no tsy avela hilatsaka. Amin’isika miteny izao hoy ity mpanao politika ity dia mihodina malaky ny raharaham-pirenena. Tsy misy fifidianana handeha eto. Noho izany dia anjarantsika no mijoro amin’ny maha tia tanindrazana antsika. Izay rehetra hiroso amin’ny fifidianana hoy izy dia kilasiana ho mpivarotra sy mpamadika tanindrazana, na iza na iza izy. Misy zavatra mandeha any ka na izaho na isika dia manana adidy. Zavatra 4 no tsy maintsy tanterahana eto Madagasikara. Ny zanak’i Dada hatramin’izay dia milaza fa tsy maintsy mody an-tanindrazana izy. Ny antony dia tsotra, ny fodiany eto no hampisy ny kaoferansy an-tampony eto. Rehefa misy io fihaonana an-tampony io hoy izy dia ho tapaka ho azy ny fifidianana lalàm-panorenana, ary rehefa vita izay vao miroso amin’ny fifidianana filoham-pirenena. Tsy ho vita anefa izany hoy Mektoub fa isaorana anareo fa tonga eto ianareo. Aoka isika hoyizy tsyho tratran’ny ady an-trano ataon’ny sasany fa isika tsy ho rava. Tsy maintsy miroso amin’ireo voalaza ireo isika hoy ny fanazavana.
MEKTOUB OMAR EL CAMILLE : VERY HASINA NY MAHAMALAGASY NOHO NY NATAON-DRAJOELINA
MEKTOUB EL OMAR CAMILLE : NY MANAMPAHAIZANA AVY ANY ANINDRANTANY NO MAMPIDIKIZO NY FIRENENA
Auteur Solo Razafy*Publié le 28 août 2013 28 août 2013 Catégories Politique
9 pensées sur “MEKTOUB OMAR EL CAMILLE : kilasiana ho mpivarotra sy mpamadika tanindrazana izay rehetra hiroso amin’ny fifidianana”
« ………NA IZA IZY NA IZA !! » MAZAVA BE!!!MANKASITRAK TOMPOKO ô!!!
Ireo daholo ny JÔKER fa mivoaka ,MIETSE NAREO FA MANANTENA ARY MIANDRY
OLONA TOA ANAREO IREO MADAGASIKARA. MIJOROA @ FAHAMARINANA ary MIADIVA ho an’i
TANINDRAZANA TOMPOKO fa ADIDY MASINA IZANY. MANKASITRAKA !!!!MANKASITRAKA TOMPOKO Ô!!!!
TIAKO BE DAHOLO NAREO IREO!
IZANY NY MAHERIFOANAY IZANY!!!
MISAOTRA MEKTOUB FA TSA MBOLA NIVADIKA IANAO ARY MINO AHO FA TSY HIVADIKA MANDRAKIZAY
ny @ FITIAVANAO NY TANINDRAZANTSIKA IOMBONANA IO.MANKASITRAKA e!!!
L’union fait la force. Mankasitraka tompokô!
Enga anie .
28 août 2013 à 13 h 21 min
Tsy hita moa izy ity ry zareo fa mamerimberina manana ny antitra.
Ireto angamba ny azontsika mbola atao:
a./ Akatso tanteraka ny asam-panjakana rehetra.Misy olona manantoka ao amin’ny tobim-bola rehetra fa tonga ny karaman’ny mpiasa rehetra.
b./ Tsara raha manantona an’i Marc Ravalomanana any Afrika Atsimo i Raymond Ranjeva mba hanoro hevitra ny filoha izay zavatra tokony hatao amin’ny fanoherana ny lalàna manjaka ao Mada satria nahita traikefa ihany iny Rangahy iny ny amin’ny mety hiadiana amin’ny tsy ara-dalàna.Raha aseho eto daholo mantsy ny tetik’ady dia ho raisin’ny mpitsikilo fotsiny.
c./ Mba azontsika hiverenana vakiana ve itony:
Envoyé par: Rayan (Adresse IP journalisée)
Date: jeu. 22 août 2013 14:42:16
Ity Tompoko misy drafitra entiko hitondràna sy handaminana ny tolona alefako ho dinihan’ny ny mpiara-mitolona Tia Tanindrazana rehetra sy ny vahoaka malagasy tsara sitrapo (Ampitao any amin’ny Filoha Ravalomanana, Ramatoa Lalao Ravalomanana,. Ampio ny tsy ampy, hahitsio izay tsy mety. Ny hevitry ny maro mahatakatra ny lavitra.
1- Voalohany aloha, tsy voatery hankinina @ ny Filoha Ravalomanana irery ny Tolona satria samy zanak’ity Firenena ity ary ny fitiavan-tanindrazana no mibaiko. Ny dikany izany dia tsy voatery miandry baiko lava izao. Ary tokony hisy VOVONANA na KOMITY FOIBE (Comité Centrale) mitarika ny tolona eto an-toerana. Hatsangana maika io vovonana io handamina sy handrindra ny tolona rehetra. Tsy azo atao ao anatin’ny Vovonana intsony ireo efa nanompo sy niara-niasa tamin-dRadomelina (Rakotoarivelo, Hanitra,…).
2- Hatsangana ny KOMITIN’NY MPITOLONA (Comités de Grêve) isaky ny sehatra rehetra izay mampifandray ny Vovonana amin’ny mpitolona rehetra isaky :
– Ny Fokontany
– Ny Commune
– Ny Faritra rehetra
– Isaky ny ministera
– Isak’ireo orin’asa miankina amin’ny Fanjakàna – Secteurs Clés (Jirama, Assurance, Air Madagascar, Banques…).
– Isaky ny toera-piasàna
– Isaky ny toeram-pianarana
– Ny mpitatitra, Cooperatives sy Associations an’ireo mpitatitra…)
– Ny mpivarotra
– Isam-piangonana tsy hanavahana finoana.
– Isam-pikambanana (Fanatanjakan-tena, artistika, fianakaviana,…) .
– Hatrany anaty tobi-miaramila.
– Miara miasa amin’ireo Fikambanana Tia Tanindrazana rehetra ny eto an-toerana na ny any ivelany (GTT).
3- Folo andro hananganana ny VOVONANA sy ny komity isan-tsokajiny. Izay mbola tsy nahatsangana ny azy aoran’ny folo andro dia manangana malaky. Ny vovonana no mandrindra ny fandaminana sy ny hetsika hiarahan’ny rehetra manao.
4- Hasiana fiheverana haingana ny Communications (Fifandraisana anatiny sy ny fifandraisana amin’ny Vahoaka) : Tracts, Affichages, Indrindra ny Radio sy ny TV. Misy komity teknika manokana hatsangana miandraikitra an’io.
5- Grêves générales illimitées manerana ny Faritra rehetra. Miaraka amin’ny Blocage n’ireo Machines Administratives. Ireo Comités de Grêve no miaraka manetsika ny vahoaka midina an-dalambe. Ny eto Antananarivo manokana, tonga dia eo amin’ny 13 mai, vahoaka 750 000 olona no indray hetsehina mba tsy ho rava na hovakin’ny miaramila fotaka andevom-bazaha.
6- Hatsangana koa komity manokana mikarakara ny filaminana (Sécurité). Mitsikilo ireo manao infiltrations sy mitady hanakorotana ary koa hiaro ny hetsika atao rehetra. Manao ny stratégie rehetra mikasika ny Sécurité.
7- Manangana Gouvernement parallèle na Gouvernement en exil (Tsy dia tsara loatra ity faharoa). Takiana ny hialan’ny Governemanta saribakoly ankehitriny. Rehefa tafapetraka io Gouvernement antsika io dia mikarakara ny fifidianana miaraka amin’ny FFKM. Tsy manao na inona na inona afa tsy ny manao Expédition ny affaires courantes fotsiny io Gouvernement io ary laharam-pahamehana ny Fifidianana.
8- Miverina amin’ny Constitution farany tamin’ny 3è République aloha no lalàna fototra. Ravàna daholo ireo rafitra petatoko (HAT, CT, CST, FFM, HCC, CES,CENIT…) napetraky ny saribakolin’ny mpanjanaka (Radomelina), izay napetrany hanompo sy hiloloha azy. Diovina ny tanàna. Diovina ny Foloalindahy.
9- Miverina ny Filoha Ravalomanana.
10- Atao ny Fifidianana karakarain’ny Gouvernement vaovao sy ny FFKM sy izay rafitra sy fandaminana vaovao hapetrany eo . Atao farany izay haingana io fifidianana io ary ny Malagasy ihany no mikarakara io. Observateurs no azon’ny vahiny hidirana. Dia izay soutiens logistiques eken’ny Malagasy, tsy manelingelina ny souveraineté. Tokony vita mialohan’ny faran’ny taona ny Fifidianana rehetra. Miasa andro amanalina ny rehetra.
FOTOKEVI-DEHIBE HIJOROANA SY IOMBONANA :
– FITIAVAN-TANINDRAZANA, FAMPANDROSOANA HAINGANA, MITSINJO IREO TARANAKA FARA MANDIMBY. (Havaozina sy hatsaraina ilay Plan de Développement MAP ny Filoha Ravalomanana).
– Tsy manaiky ny Fifidianana karakarain’ny saribakolin’ny La Frantsa (Na saribakoly vahiny na sari-@#$%& tera-tany).
– Mitaky ny Fampiharana ny Accord de COTONOU.
– Mitaky ny hitsaràna ireo nahavita heloka be vava teto amin’ny Firenena. (Nandroba, nanao Tantely afa-drakotra harem-pirenena, namotika Firenena, Namono olona,…).
Mila miasa maika sy maty paika tsara isika. Aoka izay ny tolona Goragora ataon’ireo tia tena sy tsy mandray ravin-dena nahakivy vahoaka sy tsy nahitam-pahombiazana.Hatsaharo miaraka amin’ny vava ny miara-miasa, miara-miosona sy manao fifampiraharahàna amin’ny jiolahy.
Homba ny Malagasy Andriamanitra.
d./ Dia ovaina ny « haute sphere » ao amin’ny ankolafy Ravalomanana.Efa nandefa fomba fitadiavana olona tia ny Malagasy sy vonona hiasa ho an’ny tanindrazana izahay.
Trafok’omby ome mahery…
28 août 2013 à 13 h 43 min
Miandry ny tohiny ary izahay tompoko ary manantena vokatra tsara.
Tsy hafenina kosa fa tsy manana hery atontona intsony izahay, ny patalohanay efa rovitra nandritra ny efa-taona teto ary ny vatsy efa faran’izay notsitsiana koa efa ambivitra dia ambivitra.
Raha sanatria diso famindra kely fotsiny dia ho vorokitsay sy tsy hanan-kialofana intsony ny vady aman-janakay.
Mankasitraka mialoha tompoko ny @ izay làlana tena haomby hitondranareo ny tenanay efa very fanahy !
Ahoana ireny vao2 nivoaka t@ gazety ireny .
» andeha @ tenany irery hono i Kotovelo???? » tsy maintsy miseho
eny ihany ny TANDROKA e!!!
Mbola manavaka ny TSIPARIFARY Andriamanitra .Ary itony no tena FANETRY BE itony mody
fangoloka ratsy tsisy hilavana azy raha izay kotovelo.Tsy matahotra an’Andriamanitra!!!
28 août 2013 à 15 h 32 min
AHOANA NY HIBLOKENA IO FIFIDIANANA IO.
28 août 2013 à 18 h 00 min
Michel,misy manome soso-kevitra amin’ny paikady tokony atao miaraka ao amin’ny site movansy ra8 (Rayan ny pseudo) Izany ka paikady !Tsy vitan’ny kabary fotsiny ihany tokoa mantsy izy ity,ary noho ny toe-draharaha misy ANKEHITRINY no hilàna tetikady.Tsy mety intsony ny miverin-dàlana sy mitsikera ts’isy farany fa hevitra HIARAHA-MIDINIKA hifanaovana amin’ny samy olon-tsotra no tsara ketrehina,atao matotra tsara.
Tafiditra ao amin’ireo soso-kevitra naroson’i Rayan ilay voalazanay teto,dia ny fidirana any amin’ny TV/radio-panjakàna.
Ny manahirana moa dia ny famelabelarana izany aty anatin’itony site itony satria misy ny « foza » miditra ary hanelingelina ny fahatanterahan’izany.Asa,atao hoe:tsi-ankiteniteny angamba ?
28 août 2013 à 18 h 06 min
Saika hadino,mankasitraka ny fiverenan’Atoa Mektoub tao amin’ny Magro ny tenanay.Olona manana ny maha izy azy mihitsy ny fijerinay an’Atoa Mektoub ary tsy mivadika amin’ny tanjona iombonana.Misimisy ihany ny movansa Zafy miditra ao Magro ao.Ny fitambaran’ny hery no ilaina.
Précédent Article précédent : RAKOTOAMBOA JEAN LOUIS : MIALA NY CES , CENI-T FA TSY MAHAVITA AZY
Suivant Article suivant : RODIN RAKOTOMANJATO : AZA MANANTENA FIFIDIANANA IZANY